संविधान नसच्याईए मुलुक अगाडि बढदैन : यादव ( विशेष कुराकानी ) | सप्तरी जागरण
प्रतिनिधि सभाका लागि सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ वाट निर्वाचित संघिय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हाल घरदैलोमा व्यस्त छ । यस क्षेत्रका मतदाताहरुको घरदैलौमै पुगेर उनी धन्यवाद दिईराखेका छन् । नेपाली काँग्रेसको समेतको समर्थनमा राजपा–फोरम गठबन्धनका संयुक्त उम्मेदवार यादवसँग निर्वाचन परिणाम र आगामि रणनीतिका वारेमा गरिएको कुराकानी :-
संविधान संशोधन,परिमार्जन वा त्यसलाई नसच्याए सम्म यो मुलुक अगाडि बढन सक्दैन । सबै मिलेर संविधानमा देखिएका त्रुटिहरु सच्याउनु पर्छ । यसो भएन भने जनताले अर्को वाटो पनि लिन जानेको छ ।
व्यक्तिगत अहंकार, जातिय असहिष्णुता र नश्लिवादी चिन्तन जस्ता संकिर्णताले सोच्ने हो भने त्यसले मुलुकको हित गर्दैन ।
निर्वाचन परिणामलाई कुन रुपमा लिनु भएको छ ?
यस जितलाई मैले मेरो व्यक्तिगत जित भन्दा पनि मधेशको अजेण्डाको जितको रुपमा लिएको छु । ‘मधेशवादी दल वा तीनका नेताहरुले उठाएका मुद्दाको साथमा मधेशका जनता छैनन्’ भनेर मधेश विरोधि मानसिकता बोकेकाहरुले जसरी एउटा भ्रम सृजना गर्ने गरेका थिए त्यस्ताहरुका लागि यो जित गतिलो जवाफ पनि हो । मधेशका जनता मधेशी नेताहरुका साथ अहिले पनि मधेशको मुद्दा स्थापित गर्न उत्तिकै सक्रियता पुर्वक लागि परेका छन् भने सन्देश यो निर्वाचन परिणामले दिएको छ ।
जातियता, क्षेत्रियता, पैसा लगायतका मुद्दामा जनतालाई भ्रमित पारेर मधेशको अभिमतलाई तितर वितर पार्ने प्रयासहरु पनि यसपाली सफल हुन सकेन । जातिवाद, इलाकावाद, क्षेत्रवाद इत्यादी सवै नाराहरुलाई तोटदै आम मधेशी मतदाताले मधेशवादलाई स्थापित गर्न उत्साहपुर्ण र निर्णायक मतदान गरेका छन् । विभिन्न खाले संकिर्णताको बंधनवाट मुक्त भई मधेशका जनताले राजनीतिक मुद्दा र विचारको पक्षमा जनमत जाहेर गरेका हुन् ।
‘टुरिस्ट’ उम्मेदवार भनेर तपाँई माथि निकै कटाक्षहरु भए, ‘उपेन्द्र सप्तरी पनि छाडेर जान्छन्’ भन्ने जस्ता कुराहरु अहिले पनि उठिनै रहेका छन्, साच्चिकै अबको गन्तव्य चाहि कहाँ होला ?
(हास्दै) कसै कसैलाई बिमारि लागेका छन् । ठिकसँग आईपुगेको छैन, जान्छ कि भनेर हल्ला उडाउँदैछन् । त्यस्ता हल्ला पछाडि लाग्नु वा त्यस प्रति स्पष्टोक्ति दिईराख्नु उपयुक्त हुँदैन । सप्तरीका आम जनमानसले त्यस्ता हल्ला गर्नेहरुलाई पनि जवाफ दिईसकेको अवस्था छ । त्यस्ता हल्लाहरुले सप्तरीवासी माझ म प्रतिको विश्वासमा थोरै पनि कमि आएको मैले महशुस गरेको छैन ।
बाम गठबन्धन बहुमतमै आयो, संविधान संशोधनको मुद्दा अब के होला ?
संविधान त्रुटिपुर्ण छ, संविधानमा गम्भीर गल्तीहरु भएको छ भनेर सवैले स्विकारि सकेका छन् । राज्यपुर्न संरचना, शासकिय स्वरुप लगायतका थुप्रै विषयहरु विवादित र त्रुटिपुर्ण रहेको भनि सवैले बुझि सकेका रहेछन्, चाहे त्यो बाम हुन वा दहिन । अबको मुख्य चुनौति भनेको संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई सर्व स्विकार्य वनाउनु हो । बढि भन्दा वढि वर्ग, क्षेत्र, पक्षले संविधानको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने वनाउनु हो । यसका निम्ती सवैजसो राजनीतिक शक्तिले उदारतापुर्वक दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति देखाउन सक्नुपर्छ । संविधान संशोधनका विषयमा सवै जसो राजनीतिक दलले उदारत देखाउनेछन् भने वारे हामि निकै आश्वस्त रहेका छौ । संविधान संशोधन अहिलेको मुख्य राजनीतिक अजेण्डा हुन । संविधान संशोधन, परिमार्जन वा त्यसलाई नसच्याए सम्म यो मुलुक अगाडि बढन सक्दैन । सबै मिलेर संविधानमा देखिएका त्रुटिहरु सच्याउनु पर्छ । यसो भएन भने जनताले अर्को वाटो पनि लिन जानेको छ ।
वर्तमान प्रादेशिक संरचना प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चुनावमा आउनुभयो अबको रणनीति के छ ?
सप्तरी देखि पर्सा सम्मको ८ जिल्ला मात्रै मधेश होईन । मेचि–देखि महाकाली सम्म तराई÷मधेशको भुभाग हो । यसलाई राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहको आधारमा अपव्याख्या गर्न मिल्दैन । यो ८ जिल्ला भनेको मधेशी जनताको आधार क्षेत्र हुन् । यस आधार क्षेत्रलाई टेकेर बाँकि स्थानहरुमा छरिएर रहेका मधेशी लगायत अन्य उत्पीडित वर्ग, समुदायका माग र मुद्दा संबोधन गराउन सक्ने नेतृत्वदायी भुमिका यस प्रदेशले खेल्ने छन् ।
वर्तमान राज्य पुर्नसंरचनाको खाका एकदमै गलत छ । यसलाई सच्याउनु पर्छ । नभए संघियता प्रणाली सुदृढ भएर जान गा¥हो हुन्छ । मुलुक र देशको हितका निम्ती राज्य पुर्नसंरचना आयोगले दिएको १० प्रदेशको खाकालाई संघियतामा रुपान्तरण गर्ने हो भने देशको सर्वोत्तम हितको वाटो त्यहाँ छ । तर व्यक्तिगत अहंकार, जातिय असहिष्णुता र नश्लिवादी चिन्तन जस्ता संकिर्णताले सोच्ने हो भने त्यसले मुलुकको हित गर्दैन ।
तपाँईको चुनावि प्रतिवद्धता पत्रमा सप्तरीको विकासीय मुद्दाहरु निकै उठाईएको छ, ती प्रतिवद्धताहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
काठमाण्डौमा बस्ने शासकहरुको पुर्वाग्रही सोच सप्तरी र मधेशको विकासका लागि सबभन्दा ठुलो अबरोधक हो । त्यो बदलिनु पर्छ । त्यो बदलिने वित्तिकै यहाँको विकासले गति लिन्छ । जनताले अभिमत जाहेर गरिदिएपछि निश्चय रुपमा यस क्षेत्रमा विकास निर्माणको प्रयास थाल्ने दायित्व मेरो हुनजान्छ । अब निश्चाय पनि यस भेगको विकास हुन्छ । स्थानिय चुनाव भईसकेको अवस्था छ । प्रादेशिक चुनाव पनि सम्पन्न भयो अब प्रदेश सरकार निर्माण हुने छन् । उसले पनि विकासिय गतिविधिलाई गतिशिलता दिनेछन् ।
तपाँई निर्वाचित क्षेत्रको के कस्ता विकासिय मुद्दालाई प्राथमिकता साथ अगाडी बढाउनु हुन्छ ?
सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का साथै समग्र सप्तरीनै बर्षेनी बाढी डुबानका समस्याले पिडित भईराखेको अवस्था छ । सडक छैन, सिंचाईका पुर्वाधारहरु जिर्ण र जर्जर अवस्थामा छन् । मुलुककै पुरानो विमान स्थलका रुपमा परिचित राजविराज विमान स्थलमा दुई दशक यता विमान आवागमन हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा सवै क्षेत्रमा सप्तरी पछाडी रहेको अवस्था छ । मानव विकास सुचकांकका दृष्टिले पनि सप्तरी निकै पछाडी छन् । मुलुकमै सवैभन्दा गरिबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कम आय स्रोत सप्तरीमै रहेको विभिन्न सरकारी तथ्यांकहरुले नै देखाउँछन् । यी समस्याहरु कसैको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव हुने हैन । यद्यपी यी समस्याहरुको समाधान तथा सप्तरीको विकास र समबृद्धिका लागि पक्कै पनि नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने काम मैले थाल्ने छु ।